ingqiqo Service - Mika Optoelectronic Co., Ltd
B series LED ukukhanya street
A Series ekhokelwa ukukhanya izikhukhula
S series kwenza ukukhanya izikhukhula
M Series kwabangela ukukhanya izikhukhula
Company luya kusekelwa manual lomsebenzisi, ukusetyenziswa inkqubo sikhokelo kunye nesikhokelo nokugcinwa training.Training ziquka ukusetyenziswa inkqubo, ulondolozo inkqubo kunye nokukhuselwa nezixhobo.
Emva kweNtengiso imo inkonzo
A: inkonzo yefowuni
yethu MIC isebe inkonzo emva-yokuthengisa ukunika abathengi kunye yomnxeba iiyure ezingama-24 service.When ukuba uqhagamshelane nathi, nceda usazise le nkcazelo ilandelayo:
1, yintoni igama lakho kunye nenombolo yefowuni;
2, inombolo yekhadi iwaranti;
3, uphawu nandzu (ukuba nandzu lungabonakaliswa imifanekiso, uyakwazi ukuthatha imifanekiso kangangoko kunokwenzeka wathumela kuthi)
iinjineli zethu inkonzo emva-ukuthengiswa aya kuba inkcazelo yakho ukunika inkxaso yobugcisa kunye nengcebiso.
B: Iinkonzo zonxibelelwano-time real
iinjineli inkonzo ngenkonzo MIC uya kujikeleza Xhosa & MSN & Skype & E chat izixhobo ezifana E-mail service.Through yabathengi MSN ukuthumela ikhompyutha encedwayo, umzekelo, umisele & software olusebenzayo video, ebonisa ngumthengi indlela yokuqhuba
C: kude ulawulo inkonzo
MIC kunokuba operation kude ikhompyutha encedwayo, nge-intanethi ukunika ufakelo lwesoftwe kunye setup, LED ukukhanyisa ukusilela yezobugcisa kwinkqubo software kunye nokulahlwa.
D: inkonzo yeposi
Ngexesha sesiqinisekiso, abathengi ungathumela iindawo ezineziphene ukuya MIC, siya uzicombulule kamsinya kangangoko kunokwenzeka ndibuyele you.Specific nceda ujonge ezinye amacandelo aphambili itshathi lethu ixesha lokuphendula ukusilela.